Apple iPad Pro: Famaritana, vidiny ary famoahana | Vaovao momba ny gadget
Ireo no iPad Pro 2018 vaovao
Eder Esteban | | Apple, takela-bato
Apple dia nanao hetsika vaovao tany New York androany 30 Oktobra, izay nanoloran'izy ireo andiana zava-baovao. Iray amin'ireo vokatra natolotra ao, ary andrasan'ny mpampiasa tokoa, no iPad Pro 2018 vaovao. Araka ny efa nanamarihana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, miatrika fiovana miavaka amin'ny orinasa Cupertino izahay.
Famolavolana vaovao no natolotra ho an'ny iPad Pro 2018, ankoatry ny fampidirana andiam-panatsarana, amin'ny ambaratonga rehetra. Mba hahitantsika ny maodely feno indrindra natolotr'i Apple hatreto. Vonona ny hahafantatra bebe kokoa momba izany?
Drafitra vaovao, izay miteraka fanehoan-kevitra tsara sy hery goavambe, ireo lafiny roa mamaritra tsara indrindra ity taranaka vaovao ity. Taranaky ny fanovana, araka ny filazan'ny orinasa azy ihany. Ary izany ve Ity no fiovana lehibe indrindra hatramin'ny nampidirana ny maodely voalohany telo taona lasa izay.
1 Famolavolana vaovao
2 Processor sy fitehirizana
3 Apple Pencil sy Smart Keyboard Folio
4.1 iPad Pro miaraka amin'ny efijery 11-inch
4.2 iPad Pro miaraka amin'ny efijery 12,9-inch
Ny zava-baovao lehibe hitantsika amin'ity iPad Pro 2018 ity dia ny tsy fisian'ny bokotra Home ao amin'izy ireo. Fanapahan-kevitra iray manaraka ilay nataon'ny Apple tamin'ny maodeliny iPhone, noho izany dia tsy zavatra tsy nahy izany. Ny tsy fisian'ity bokotra ity dia mamela zana-kazo kely kokoa, izay adika amin'ny efijery lehibe kokoa. Izay tsy isalasalana fa mandray anjara mba hahatonga azy io ho safidy tonga lafatra raha ny amin'ny fijerena andian-tsarimihetsika na sarimihetsika ao amin'izy ireo.
Habe roa no ampidirina amin'ity taranaka vaovao ity. Misy maodely 11-inch ary habe 12,9-inch. Mba hahafahan'ny mpampiasa misafidy ny habeny heveriny fa mety indrindra ho azy ireo. Ny hany mampiavaka azy roa dia ny habeny, amin'ny ambaratonga famaritana dia mitovy izy ireo.
Ny iPad Pro dia nahita ny fihenan'ny frame-ny, indrindra fa ny sary ambony sy ambany dia hita io. Saingy zana-kazo matevina izy ireo afaka manana ny sensor ID Face ao amin'izy ireo, iray amin'ireo asan'ny kintana amin'ity taranaka vaovao ity. Zavatra azo natao nefa tsy nila notch, hanamaivanana ny maro. Azonao atao ihany koa ny mahita fa ny zorony dia efa boribory, ka nilatsaka ny endrika 90 degre.
Manamafy ihany koa i Apple fa mpampiasa izany izy ireo dia afaka mampiasa Face ID amin'ny iPad Pro mitsivalana na mitsangana. Na dia eo amina fanahafana voalohany aza dia tsy maintsy tazomintsika amin'ny maody fakana sary izany. Raha vantany vao nahavita an'io isika dia afaka mampiasa azy amin'ny fomba roa. Inona no hanome antsika safidy bebe kokoa hampiasana.
Miatrika efijery retina misy ranoka amin'ity iPad Pro ity izahay. Apple dia mbola tsy nanao ny dian'ny OLED tamin'ity taranaka ity, fa mahita ny tsara indrindra ao anatin'ny LCD ho an'ity efijery ity isika. Mampiasa ny teknolojia iPhone XR ho an'ny fampisehoana izy io, izay fampisehoana retina ranon-javatra izay noresahintsika teo aloha. Ho fanampin'izay, manana ProMotion izahay, gamut miloko marevaka ary teknolojia TrueTone misy ao aminy.
Processor sy fitehirizana
Volavola vaovao sy processeur vaovao. Satria i Apple dia mampiditra ny A12X Bionic amin'izy ireo, izay dikantenin'ilay processeur natolotra iray volana lasa izay miaraka amin'ny iPhone vaovao. Izy io dia processeur izay hampiditra fanatsarana isan-karazany, tsy amin'ny fahombiazana sy amin'ny hery ihany. Misy ihany koa ny fanatsarana sary.
Miorina amin'ny fizotran'ny iPhone 7nm. Ny CPU-ny dia manana totalin'ny valo cores, raha ny GPU, noforonin'i Apple mihitsy, dia manana 7 cores. Ao no ahitantsika transistors 10.000 tapitrisa. Lasa manan-danja ihany koa ny motera neural, satria ny orinasa Cupertino dia nampiditra ilay hitantsika tamin'ny iPhone tamin'ity taona ity.
Izy io dia Neural Engine izay hamela ny fivezivezena 5 tapitrisa tapitrisa hatao, azo alaina miaraka amin'ny Machine Learning. Lafiny iray hafa nohatsaraina tamin'ireo iPad Pro vaovao ireo avy amin'ny orinasa amerikana. Mikasika ny fitehirizana dia ho hitantsika izao hatramin'ny 1TB fitehirizana tselatra haingam-pandeha.
Tsy misy isalasalana, iray amin'ireo fiovana manaitra indrindra ny fampidirana USB Type-C amin'ity iPad Pro ity. Nisy ny honohono tato anatin'ireto herinandro ireto fa hampiditra an'ity Apple vaovao ity i Apple, ka io no voalohany. Ary efa nitranga ihany izany tamin'ny farany. Ka ny orinasa dia manilika ny varatra ankehitriny. Ho fanampin'izany, ny iPhone dia azo ampangaina amin'ny alàlan'ny tariby USB-C mankany amin'ny tselatra ary ampifandraisina amin'ny efijery ivelany hatramin'ny 5K.
Apple Pencil sy Smart Keyboard Folio
Tsy ny iPad Pro ihany no nohavaozina, fa ny fitaovana ilaina koa no nahavita azy. Toy ny amin'ny fitaovana lehibe, dia mahita fiovana isika na amin'ny endrika na amin'ny haavon'ny asa ao amin'ireo Apple Pencil sy Smart Keyboard. Fitaovana roa izy ireo izay niaraka tamin'ny fianakavian'ity fitaovana ity nandritra ny fotoana ela, noho izany dia zava-dehibe ny fanavaozana azy ireo.
Voalohany indrindra hitantsika ny Smart Keyboard Folio. Apple dia nanapa-kevitra ny hamerina hiditra ny keyboard amin'ny iPad Pro amin'ny alàlan'ny Smart Connector, izay ahafahana mampiasa ny keyboard fa tsy mila mampiasa Bluetooth na batterie integrated. Ity dia zavatra ahafahantsika manadino ny enta-mavesatrao.
Araka ny efa nolazainay taminao, dia nisy fiovana ihany koa tamin'ny endriny. Raha izany dia, Apple dia manolotra lamina fitendry matevina kokoa. Ho fanampin'izay, mahita toerana mitongilana efijery roa izahay. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hampiasa azy eo amin'ny birao na eo ambony latabatra isika, fa amin'ny toerana hafa dia azo ampiasaina eo am-pofoana izy io, raha mampiasa azy mipetraka eo ambony sofa na eo am-pandriana isika.
Ny fitaovana faharoa amin'ity iPad Pro ity dia ny Apple Pencil. Ny orinasa Cupertino dia nanamboatra endrika mitovy amin'izany, fampidirana andriamby ao aminy, mba hahafahany mifikitra amin'ny takelaka, araka ny hitanao amin'ny sary. Rehefa manao an'io isika dia miverina tsy mandeha amin'ny laoniny ny stilosy. Noho izany dia mora kokoa ny mitondra azy izao. Ilay maodely vaovao koa dia manana faritra vaovao azo zahana, izay ho azontsika ampiasaina hanatanterahana hetsika faharoa.
Toy ny mahazatra dia mivoaka amin'ny dikanteny isan-karazany ireto iPad Pro ireto, izay tsy mitovy amin'ny fitehirizan'izy ireo ao anatiny, ary koa raha mila kinova misy WiFi na iray misy WiFi LTE ianao. Miorina amin'izany dia mahita sakany amin'ny vidiny malalaka isika. Asehonay aminao ny vidiny izay hananana ny kinova rehetra amin'ny taranaka vaovao any Espana, amin'ny habeny roa:
iPad Pro miaraka amin'ny efijery 11-inch
64 GB miaraka amin'ny WiFi - LTE: 1.049 euro
256 GB miaraka amin'ny WiFi - LTE: 1.219 euro
512 GB miaraka amin'ny WiFi- LTE: 1.439 euro
1 TB misy WiFi- LTE: 1.879 euro
iPad Pro miaraka amin'ny efijery 12,9-inch
64 GB miaraka amin'ny WiFi - LTE: 1.269 euro
256 GB miaraka amin'ny WiFi - LTE: 1.439 euro
512 GB miaraka amin'ny WiFi- LTE: 1.659 euro
1 TB misy WiFi- LTE: 2.099 euro
Apple koa dia nanambara ny vidin'ny accessories. Ny vidin'ny keyboard dia 199 euro ho an'ny maodely 11-inch ary 219 euro ho an'ny habe 12,9-inch. Ny vidin'ny Apple Pencil vaovao dia 135 euro.
Ny kinova iPad Pro rehetra izao dia azo tehirizina amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny tranokala Apple. Hotontosaina amin'ny 7 novambra ny fanombohana ireo maodely roa ireo manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany i Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Apple » Ireo no iPad Pro 2018 vaovao
Toy izany koa ny MacBook Air vaovao sy Mac Mini 2018
eSIM: Izay rehetra tokony ho fantatrao momba izany